ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများ ‹ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန
၇‐၅‐၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်း အပြည့်အစုံ
၂၂‐၁‐၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်း အပြည့်အစုံ
၁၅‐၁‐၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်း အပြည့်အစုံ
၁၁‐၁၂‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်း အပြည့်အစုံ
၁၃‐၁၁‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်း အပြည့်အစုံ
၂၅‐၉‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်း အပြည့်အစုံ
၂၁‐၉‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်း အပြည့်အစုံ
၇‐၉‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်း အပြည်အစုံ
၄‐၉‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်း အပြည့်အစုံ
၂၈‐၈‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်း အပြည့်အစုံ
၁၄‐၈‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်း အပြည့်အစုံ
၃၀‐၇‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်း အပြည့်အစုံ
၁၇‐၇‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်း အပြည့်အစုံ
၂၂‐၆‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်းအပြည့်အစုံ
၁၅‐၆‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်းအပြည့်အစုံ
၅‐၆‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်းအပြည့်အစုံ
၁‐၆‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်းအပြည့်အစုံ
၁၁‐၅‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်းအပြည့်အစုံ
၂၈‐၄‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်းအပြည့်အစုံ
၂၀‐၄‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်းအပြည့်အစုံ..
၇‐၄‐၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အာမခံငွေ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ပေးသွင်းပြီးသည့်အေဂျင်စီများစာရင်းအပြည့်အစုံ..
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၁-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အပြီးရုပ်သိမ်းသည့်စာရင်းအပြည့်အစုံဖတ်ရှုနိုင်ပါရန်….
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၁၂-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အပြီးရုပ်သိမ်းသည့်စာရင်းအပြည့်အစုံဖတ်ရှုနိုင်ပါရန်…
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၆-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်အပြီးရုပ်သိမ်းသည့်စာရင်းအပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်….
(၁၂-၅-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ စာရင်း
(၃၀-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ စာရင်း
(၁၆-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ စာရင်း အပြည်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန် (6386)
(၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ စာရင်း အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန် ..
(၁၄-၈-၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ စာရင်း အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်.. (935)
(၂၂-၆-၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ စာရင်း အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ရန်.. (1248)
(၃၀-၅-၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ စာရင်း အပြည့်အစုံ သိရှိရန်.. (495)
(၂၆-၄-၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ စာရင်း အပြည့်အစုံ သိရှိရန်... (990)
(၉-၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ စာရင်း အပြည့်အစုံသိရှိရန်.. (531)
(၁၉-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ စာရင်း အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ရန်... (806)
(၅-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ စာရင်း အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ရန်... (594)
(၁၇-၁၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိစစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ စာရင်း အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (890)
(၂၀-၁၀-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိစစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ စာရင်း အျပည့္အစံုကိုသိႏိုင္ပါရန္.. . . . . . (772)
(၁၂-၅-၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိစစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ ( ၂၅၈ )ခုစာရင်း အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (1301)
(၂၆-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၃၀-၁၂-၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိစစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ (၂၅၉)ခုစာရင်း အျပည့္အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (1745)
(၅-၁၂-၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိစစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ (၂၆၀)ခုစာရင်း အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ................... (902)
(၁၇-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၂၁-၁၀-၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိစစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ (၂၆၀)ခုစာရင်း အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ................... (893)
(၅-၉-၂၀၁၆ မှ ၉-၉-၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိစစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ (၂၆၃)ခုစာရင်းအျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္............ (1140)
ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်ကို သဘောတူလက်မှတ်ရးထိုးခဲ့သည့် အေဂျင်စီများစာရင်းအျပည့္အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္............. (2416)
၂၀၁၄ခုနှစ်မှ(၂၂.၇.၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ပြန်လည်အပ်နှံသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း (၉)ခုနှင့် ဌာနမှအပြစ်ရှိ၍ အပြီးရုပ်သိမ်းသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း (၃)ခုစာရင်းအျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္..... (953)
(၂၂.၇.၂၀၁၆) ရက်နေ့အထိ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီ (၂၆၀)ခု စာရင်းအျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္..... (1018)
(၃.၆.၂၀၁၆) ရက်နေ့အထိ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသောပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီ (၂၄၇)ခု စာရင်း အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္...... (1150)
(၂၂.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသော ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ(၂၅၃)ခု စာရင်းေဒါင္းလုပ္ရယူရန္ (1038) ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္-၂ (2108)
ေအဂ်င္စီ (၂၀၂) ခု အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . (3978)
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္သည့္ ကုမၸဏီစာရင္း (၆၂) ခု အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (1689)
ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သည့်အချက်များအပြည့်အစုံ
ျပည္ပ အလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (3870)